दाम्लोले बाँधेर जनता कुट्ने वडाध्यक्ष पक्राउ, के हुन्छ कारबाही ? – Classic Khabar
August 5, 2021 322
जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपाका- २ का वडाध्यक्ष रामबहादुर नेपाली पक्राउ परेका छन्। साउन १५ गते स्थानीय सर्पे दमाइलाइ डोरीले बाँधेर कु,ट,पि,ट गरेका उनलाई जाजरकोट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। यद्यपि प्रहरीले भने उनलाई पक्राउ गरेको नभई आवश्यक सोधझपुछका लागि जिल्लामा बोलाइएको जनाएको छ।
‘स्थानीयलाई कु,टेको भिडियोका आधारमा वडाध्यक्ष्यज्यूलाई बोलाएका छौं’, जाजरकोटका प्रहरी निरीक्षक खुमानन्द पाण्डेले भने,’पक्राउ गरेको त भन्न मिल्दैन, सोधपुछका लागि बोलाएका हौं।’बुधबार साँझ पञ्चाला प्रहरी चौकीको टोलीले उनलाई घरबाटै नियन्त्रणमा लिएको हो। टाढाको दूरी भएका कारण विभिन्न इलाका प्रहरीको रोहोबरमा उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा झिकाइएको निरीक्षक पाण्डेले जानकारी दिए।
पीडितलाई पनि सदरमुकाम बोलाइएको छ। पीडितले अहिलेसम्म जाहेरी दिएका छैनन्। पीडितको बयान, घटनाको प्रकृति र भिडियोलाई आधार मानेर कानुनी कारबाही हुनसक्ने प्रहरीले जनाएको छ। ‘हामीले पीडितलाई जाहेरी दिन आग्रह गरेका छौं, पीडितले जाहेरी नदिए पनि कानून बमोजिम कारबाही हुन्छ,’ उनले भने ।
Prevआफ्नो श्रीमान बिनोदले कलाकार रुबिनालाइ सिन्दुर हालेको दृश्य भाइरल भएपछी धरधरी रोईन् अनिता खड्का, पहिलो गीतमै यस्तो भएपछी (भिडियो)
Nextदुर्गेश थापा के हो यो ख्यास्स पुतली भनेको ? चेलीबेटिले तीज मनाउन पाएनन भनेर किन खुशी भाको दुर्गेश ? (भिडियो सहित)